HARVEST MAR KASTA OO SANADKA: QAJAARKA ON WINDOWSILL - BEER CAGAARAN
Way adagtahay hadda in la helo guri aan lahayn daaqado-ubaxyo on daaqadaha daaqada.
Waxay ku kordhiyaan raaxada guriga, sidoo kale waxay abuuraan jawi hal abuur leh. Laakiin si aad ugu korto guriga ma aha oo kaliya masaafo, violets ama dieffenbachia.
Wixii foosha noocaas ah xitaa qajaarka. Tani ma aha nidaam qallafsan, gaar ahaan haddii aad ku beerto dhirta ornamental sanado.
Cucumber on windowsill ma aha oo kaliya qurxinta quruxda badan, laakiin sidoo kale bixiso goosashada wanaagsan ee daryeelka saxda ah.
Sidoo kale waxaad la yaaban kartaa asxaabtaada laanta nooc ka mid ah beerta balakoonkaaga. Sidoo kale yaanyada cherry waxay ku biiri karaan qajaarka, dhammaantoodna waxay kuugu farxi doonaan midabkooda dhalaalaya.
Waa hagaag, aynu bilowno?
Waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay inaad ku bilowdo faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada ah habkan oo ah koritaanka qajaarka. Qodobka ugu weyn ee dabiiciga ah ayaa u jajaban ujeedada beerashada - waa in la helo qajaarka cusub ee guga hore, xitaa xilliga jiilaalka. Aad ayay u fiicantahay inaad soo qaadato qajaar cusub beerta yar yar oo hubso in cidina ayan lahayn buuggan cayayaanka leh cayayaanka.
Sidoo kale faa'iidooyinka waxaa ka mid ah kordhinta qadarka oksijiinta guriga. In caleemaha iyo caleemaha qajaar ah, sida dhirta cagaarka kale, waxay sii socotaa geeddi-socodka photosynthesis, kaas oo ay weheliyaan sii daayo oksijiin. Oo weliba duurka sare waxay noqon doonaan quruxda quruxda badan ee guriga, sababtoo ah waxaad mar walba muujin kartaa heerka xirfadahaaga qaraabadaada iyo asxaabtaada, gaar ahaan haddii mid ka mid ah uu leeyahay hiwaayad la mid ah.
Khasaaruhu waa: dhibaatooyinka abuuritaanka jawi karti leh sida qajaarka waa dhaqan dhaqso badan. Iyadoo la'aanta iftiinka iftiinka ama geedaha kulaylka si fudud ma sameyn doonaan ubax, oo sidaas darteed u midho u. Dhibaato kasta waa mid la xalin karo, markaa su'aalahan waa la xallin karaa.
Meesha ugu fiican ee lagu hayo dheriyada iyo geedo, iyo duurka horayba u bislaaday waxay noqon doonaan garabka koonfurta ama bariga ee aqalka. Haddii tani aysan suurtogal ahayn, oo ay tahay inaad dhirta ku dhejiso galbeedka ama dhinaca waqooyiga, markaa waxaad u baahan doontaa inaad siiso nalal dheeraad ah.
Waxa ugu wanaagsan in la bilaabo baadiyaha daaqsinta muddada dhexe laga bilaabo bartamihii January, tan iyo markii xitaa iftiinka qoraxda sii dheeraado, iyo qorraxdu sii kordhayso daruuraha.
Laakiin haddii aad go'aansato inaad bilowdo geeddi-socodka xilliga dayrta, ka dibna u diyaari inaad hesho biilasha waaweyn ee korontada, sababtoo ah inta lagu jiro muddadan xiliga duurka waxay u baahan doontaa inay bixiso caymis dheeraad ah illaa 15 saacadood maalintii!
Tan iyo dhamaadka Janaayo, tirada saacadaha iftiin dheeraad ah waxaa la yareeyn karaa ilaa 3-4, tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay cimilada daruurta leh. Iftiiminta, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho qalabka khaaska ah, oo loo yaqaan "phytolamps", laakiin haddii aanay jirin, waxaad isticmaali kartaa kuwa caadiga ah, kuwa xaydhaha leh.
Qoyaanku waa barta kale ee muhiimka ah ee geeddi-socodka diyaarinta iyo koritaanka duurka qajaar. Beteriyada ku jira guryaha ama guryaha gaarka loo leeyahay ayaa hawada qallaji kara. Si qajaarka loo raaxaysto, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho hindhistarro khaas ah, waxaad sidoo kale ku dabooli kartaa bateriga maro qoyan oo gawaarida lagu shubo weelasha qoyan ee hoostiisa.
Kororka guud ee qoyaanka ee guriga ayaa faa'iido leh ma aha oo kaliya dalagga, laakiin sidoo kale dhirta kale iyo, dhan kasta, adiga. Sida heerkulka hawada, wax walba waa sida caadiga ah. Inta lagu jiro maalinta, waa in ay noqotaa + 21 ... +24 ° S, iyo habeenkii calaamadda heerkulbeegga waa inuu gaaraa + 18 ... +19 ° S.
Heerkulkani waxaa badanaa lagu hayaa guryaha casriga ah, laakiin xididada ma aysan qabin on windowsill, ka yar dheriyada aad u baahan tahay inaad geliso waxyaabaha loogu talagalay rinjirta kulaylka. Xayndaabka polymer ama kuraasta qoryaha ayaa loo isticmaali karaa walxo sidan ah. Ka hor inta ku beeri geedka, waa mid aad u muhiim ah in la abuuro lakabka dufanka wanaagsan ee dheriga halkaas oo geed ayaa kori doonaa ilaa fruiting.
Qeybta hoose ee taangigu wuxuu u baahan doonaa in la jiifiyo claydite, taas oo markaa dhici karta dhulka jiifa. Dhirtu waa inay ahaato mid weyn si ay duurka uhin la'aan iyaga ku jira, iyo sidoo kale ma jiraan qoyaan la joogtada. Haddii kale, xididdadu waxay bilaabi doonaan in ay dhintaan haddii heerkulka saxda ah iyo qoyaanka ciidda si fiican loo hayo. Sixty ama ilaa siddeed litir oo dherer ah ayaa ku haboon duurka qajaar.
Sida for beerto, waxaa loo samayn karaa sida ugu dhakhsaha badan ee dheriyo waaweyn, iyo koraan geedo.
Xaaladda kowaad, miraha aad hore u soo iibsatay, waxaad u baahan tahay inaad ku beerto dherarka 2 - 3 gogo '. Xaaladda geedo u baahan tahay in ay abuuraan prikopat abuurka unugyada cajaladaha ama koobabka caaga caadiga ah.
Xulashada ugu fiican waxay noqon laheyd in la isticmaalo dheriga peat, taas oo lagu dari karo geedo. Markaas ka dib markii transplanting geedo aan la bacrin doono.
Ka hor intaan la dhicin, hubi inaad nadiifi abuurka si looga saaro dhammaan xuubka fungus. Ciidda waa la soo gadan karaa, adigana diyaar baad u noqon kartaa.
Si deg deg ah ayaad u diyaarin kartaa isku dhafka dhulka, taas oo markii horeba la bacrimiyo. Halabuurka isku dhafkan waa in lagu daraa carrada caadiga ah, sida balka, caleenta qalalan, iyo sidoo kale ciidda dukaanka. Wax kasta waxay u baahan tahay in lagu qasi karo qayb ka mid ah 2: 1: 1: 1, oo ku daraya 100 g oo ah ash iyo jilicsan, iyo sidoo kale 200 g oo ah digada qalalan.
Iyada oo noocan oo kale ah carrada, qajaarka aan loo baahan yahay at dhan. Isku darka ka soo baxa wuxuu u baahan doonaa inuu ku seexdo dheriga, iyo jeermis ka qaado xal xoog leh oo ah kaneecada. Kadib soo ifbaxa geedo labadaba kiisaska abuurka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo heerkulka + 22 ... + 24 S, iyo habeenkii waxaa suuragal ah in la yareeyo + 17 ... + 18 ° C.
Baahida 2 - 3 jeer maalintii sprouts moisten iyo ciiddaiyaga oo ku rusheeya biyo diirran oo dhalada ka dhalaalaya.
Marka geedo u muuqday on 3 - 4 ee caleen this, geedo horey loo sii transplanted galay dheriyo waaweyn. Waxaad maareeyn kartaa duurka si aad dhulka uga saartid xididada. Isla markiiba beerashada, qajaarka waa in la waraabiyaa oo baxo si nasasho ah dhowr maalmood, ilaa ay ugu dambeyntii qaataan xididka.
Haddii aadan sameysan ciid ah nafaqada, markaa waxaad u baahan tahay usbuuc kasta codso bacriminta gaarka ah ee dhulka. Marka ay duurka u galaan marxaladda dufan firfircoon, waxaad u baahan tahay inaad ku quudiso nitrophoska (qiyaastii 4 g halkii 1 litir oo biyo ah).
Iyadoo ay duurka u baxaan, caleemaha waxaa laga yaabaa inay yaraadaan xidhxidhaan ama lumiyaan midab. Tani waa calaamad hubaal ah oo aad u baahan tahay in aad sameysid dhar cad, taas oo ah, fiidkii si loo hirgeliyo duurka oo leh xalka nalalka kalsiyum ama HOL.
Dhammaan noocyada kala duwan waxay ku dhici karaan cimilada guryaha, markaa waa inaad si taxaddar leh u dooratid markaad dooranaysid abuurka, gaar ahaan haddii aadan waligaa ku habooneyn habkan korriinka qajaarka.
Sidoo kale xiiso leh inaad wax ka akhriso noocyada kala duwan ee qajaarka
Beelaha Parthenocarpic. Nooc ubax ah ayaa inta badan haween ah.
Bushes si fiican miro, xitaa xaaladaha iftiin hooseeya. Geedaha ayaa tuura qadar yar oo caleemo lateral ah.
Miraha waa dheer (celcelis ahaan 22 - 25 cm), miisaanka ay gaaraan 250 - 260 g, dushiisa waa siman, sarreenka cad, dhadhanka Zelentsi waa mid aad u fiican.
Beeladani ma saameynayso kallanaatka rootiga, barafka iyo askohitoza. Wax-soo-saarka ayaa aad u sarreeya - qiyaas ahaan 28 kg oo mitir laba jibaaran. Kala duwan ayaa caadi ahaan la kulma isbeddelka heerkulka.
Isku-xidhka dhererka sareeya iyo ubaxyada inta badan dumarka.
Miraha waa oval, koraan ilaa 15 - 25 cm dhererka, leh maqaarka, daacad ah, oo aan qadhaadh.
Waxaa loo adeegsadaa samaynta saladh sababtoo ah dhadhankiisa aadka u wanaagsan. Laanqayrta xayawaanka oo si liidata, sidaas darteed aan qabin daryeel. Zelentsy wuxuu u dhowaadaa si siman, iyada oo mid kasta oo ka mid ah ay koraan tayo sare oo ku filan.
Ma jecleysan tirada xadiga nitrogen ee carrada, maadaama aysan sii kori doonin da 'wayn wakhti dheer isla markaana si fiican u koraan. In diidmo isku dhafka ah ee loo yaqaan 'cystic acid' iyo 'askohitoza'.
Hybrid. Goob salad ah Partenokarpik.
By waqtiga Bisaylkiisa ku dhaco hoos category qaybta dhexdhexaad ah (57 - 67 maalmood). Buundooyinka waa iswaafajin, branching waa xaddidan tahay, isweydaarsiga waa dhexdhexaad.
Miraha waa qaab cylindrical ah, oo leh qadar yar oo aan joogto ahayn iyo pubescence cad. Midabka qajaarka waa caadi, laakin waxaa jira xitaa hurdi jaale ah.
Kordhi ilaa 20 - 22 cm dhererka, miisaankuna wuxuu helaa 145 - 195 g. Celceliska dhalidda waa 18 kg halkii mitir labajibbaaran. Galka ayaa difaacaya labada nooc ee wax xayawaannada budada ah.
Kala sooc "cayaaraha"
Asal ahaan aad u dulqaadanaya parthenokarpik geedka.
Dhirta waxay u baahan yihiin celcelis ahaan 50 - 55 maalmood si ay u galaan fruiting.
Buundooyinka waa mid aad u awood badan, iyada oo tiro badan oo caleemo ah.
Miraha weyn (18-20 cm, 180-200 g), oo leh tubercles waaweyn, cirbadaha-qaababka, cirbadaha cad.
Wax soo saarku waa mid cajiib ah - 30 - 35 kg halkii sq.m.
Talooyin ku saabsan Cucumber
Marka caleemaha shanaad ama lixaad ay ka muuqdaan asliga ah, waa wakhti ay ku xiraan duurka.
Sidaa darteed waxaad u baahan tahay tirinta mitirka prikopat in dhexda taangiga iyo xidhxidhaan si ay u, iyo waxaad u baahan tahay inaad ku xerin leh nudaha unugyada jilicsan si aanay u sababi dhaawaca farsamada ee caleemaha.
Muraayad ku filan oo dheer ayaa lagu dari karaa daaqada lafteeda, laakiin daryeelka waa in la qaataa si loo hubiyo in aysan qaboojin karin.
Sida manjooyin, sidoo kale ma jiraan wax dhibaato ah. Laamaha waa in la gooyaa heerka caleenta koowaad, sidaa daraadeed hal cunug oo keliya ayaa weli taagan.
Caleemaha la dhisi doono cusub, waxay u baahan yihiin in la gooyo si la mid ah. Marka uu kormeeruhu uu bilaabo inuu ka soo baxo dhererka daaqada, waxaad u baahan doontaa inaad ku dhejisid caarada badbaadadan.
Waxaa lagama maarmaan ah in la buuxiyo kaydka qoyaanka dhulka maalin kasta biyo, taas oo muddo dheer istaagtay oo la kululeeyay ugu yaraan + 27 ° C. Haddii cimiladu qorraxdu ka baxdo, markaas dhulka ayaa u baahan yahay qoyaan badan, sidaa darteed mugga biyaha ayaa u baahan in la kordhiyo. Waxaa muhiim ah in aanad ku dhaafin arrintaan, haddii kale nidaamka xididku wuxuu bilaabi doonaa kalluumeysiga.
Khajaarka quudinta waa arrin aad u macaan. Nidaamkan waa la fuliyaa haddii loo baahdo. Haddii ciidda la gooyay bacrin, markaa bacriminta guud ahaan looma baahna. Haddii ay duurka ay daciif yihiin, caleemuhuna hoos u dhacaan, markaa waxaad u baahan tahay inaad qaaddo tallaabooyin degdeg ah.
Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho kuwan isku dhafan ee macdanta ama bacriminta dareeraha ah ee aan lahayn ur aan dabiici ahayn.
Wakhtiga habka bacriminta marka hore waa duurka ay gaartay da'da hal bil iyo badh, iyo xilligaan waa in la tiriyaa xilliga ay caleemaha kowaad soo muuqdaan dusha sare.
Wareegga u dhexeeya laba dabiib waa 25 ilaa 30 maalmood.
Goynta waa lagama maarmaan marka ay gaarto da'da 6-7 maalmood, tanna waa in la sameeyaa inta badan, sidaa daraadeed geeddi-socodka dhismaha qajaarka cusub ayaa dhacaya.
Hadda waxaa cad in waxa beerista qajaarka on windowsill waa, sida loo fuliyo habka this, iyo ka dib - in aad naftaada leh qajaarka cusub ee dhexe ee March.